ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ရပ်တန့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုရလောက်အောင် ဆက်ဆီကျပြီးမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ရပ်တန့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုရလောက်အောင် ဆက်ဆီကျပြီးမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ရပ်တန့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုရလောက်အောင် ဆက်ဆီကျပြီးမိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာ ကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ် ထင် ပါ တယ် .. ။ ဆွဲမက် ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမော စရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေ နဲ့ ပုရိသ တွေ ရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထားတဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ်လ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် လေးဟာ လှရက် လွန်းနေ တာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာကို လည်း လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ် တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာ လည်း တွေ့ရပါ တယ်..။ လတ်တ လော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက် စား အလှ တရားတွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားထား တဲ့ အလန်းစား ပုံ လေး ကိုဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူတွေ များ ပြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပုရိသ တွေ အများဆုံး ဝန်းရံ ခြင်း ခံနေ ရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် . . ။
ယခု အခါမှာ တော့ သူမ က ပုံလေး ထဲမှာ ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက် လွန်းနေ ပြီး ပုံတွေ ကို ပရိသတ် ကြီး အတွက် တင်ပေးထား တာ ဖြစ်ပါ တယ် . . ။သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှက တော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစား နေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ချစ်ပရိသတ် ကြီး လည်း ဝင့်ထည် ရဲ့ အမိုက် စား ပုံလေး ကို ကြည့်ရှု နိုင် စေရန် ဖော်ပြပေး လိုက် ပါ တယ် … .
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာ ကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ဂုဏ္ရွိန္ဝင့္ထည္ ကို သိၾကမယ္ ထင္ ပါ တယ္ .. ။ ဆြဲမက္ ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာ စရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလးေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူ ထားတဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္လ္ ဂုဏ္ရွိန္ဝင့္ထည္ ေလးဟာ လွရက္ လြန္းေန တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ .. ။
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး မ်ားစြာကို လည္း လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚ တြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ရွိ တာ လည္း ေတြ႕ရပါ တယ္..။ လတ္တ ေလာ မွာေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္ စား အလွ တရားေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားထား တဲ့ အလန္းစား ပုံ ေလး ကိုေဖာ္ၿပ ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူေတြ မ်ား ျပား ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ပုရိသ ေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံ ျခင္း ခံေန ရတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ . . ။
ယခု အခါမွာ ေတာ့ သူမ က ပုံေလး ထဲမွာ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္ လြန္းေန ၿပီး ပုံေတြ ကို ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ တင္ေပးထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္ . . ။သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ အလွက ေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီး လည္း ဝင့္ထည္ ရဲ့ အမိုက္ စား ပုံေလး ကို ၾကည့္ရႈ နိုင္ ေစရန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ ပါ တယ္ … .
Next post ကိတ်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းလေးတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း အထင်းသာမြင်နေရတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး